Qalanjo Quruxdeed Taqaan, Quud Ma Gashaa??!! “Cajiib Baro Hablaha Cusub” - iftineducation.com
iftineducation.com – Waa qormocajiib ah oo kuu ifin doonto waxyaabo badan oo kaa qarsoonaa kuna saabsan hablaha cusub ee soomaalida ah kuna soo badanaya dhulalka aay soomaalida ku nooshahay..
Dumarka sida uu nabigeeni subanaa (scw) tilmaameyba waxaa lagu guursadaa afar, guruxdeeda, nasabkeeda, maalkeeda iyo diinteeda. Waxaa uu nabigeenu ku taliyey in tan diinta u saaxiibka ah inaan raadino.
Hadaba quruxda indho-sarcaadka ee dumarka qaarkood, ee aaney wax kale u raacsanayn ayaa ku keenta ragga khatalka ugu weyn ee nolosha, taasoo qaar ay u waashaan, kuwo ku caydhoobaan, kuwana kuba duloobaan. Dumarka noocan ah ayaa ka war haya quruxdooda, kuwasoo si aan gabasho lahayn u isticmaala muqooda aadna u jahawareeriya rag badan oo ay beerlaxawsi kula wada socoto. Hadaba qalanjo quruxdeeda taqaan, quud ma gashaa?
Culimada Cilmu-nafsiga ee ka howl gala shabakada kobciye.com oo qormadaan idiin soo gudbineeyso ayaa sheega had iyo jeer in hadii erey ama ficil dhowr jeer lagu celceliyo uu gabadhu aay is aaminto.
Waxaa haboon hadaba in raggu raacaan taladii wacneyd ee nabigeena s.c.w, oo ay raadsadaan asxaabul-diin. Hablaha asxaabul-diinka ah ayaa iyaguba qaarkood aan ka yaraysan qurux qaabeedka ay qalnjooyinku leeyihiin, balse ay u dheer tahay inay ku qanciso nolosha aduunka, kaana saaacido u dagaalanka ta aakhiro.